Ladoany – Laharana maitso 360: hangataham-panazavana, hiadiana amin’ny kolikoly… | NewsMada
Ladoany – Laharana maitso 360: hangataham-panazavana, hiadiana amin’ny kolikoly…
Par Taratra sur 21/08/2019
Mitohy ny asa fanadiovana eo anivon’ny ladoany, raha jerena ny fepetra vaovao namoronana ny laharana maitso 360, azo antsoina maimaimpoana amin’ny fotoana rehetra.
Be loatra ny fitarainana sy ny feo mandeha momba ny ladoany avy amin’ny sokajin’olona isan-kazarany, indrindra ny mpandraharaha. Ela loatra ny fomba fiasa, manjaka ny kolikoly, misy ny voakarakara tsara, ao ny ampifalafilaina, sns. Feo mandeha momba ny fadintseranana avokoa ireo nefa tsara marihina fa mpiasam-bahoaka ny mpiasan’ny ladoany, atao hanompo vahoaka sy hampandeha tsara io asam-panjakana io hampidi-bola betsaka ho an’ny fanjakana.
Koa avy amin’io laharana maitso 360 io, maimaimpoana ny fiantsoana azy, azo angatahana fanazavana, ametrahana fitarainana, ilazana ny zavatra tsy mety, itondrana ny endriky ny kolikoly, na koa tolo-kevitra sy fisaorana tamin’izay fahafaham-po azo avy amin’ny asan’ny fadintseranana. Na aiza na aiza eto Madagasikara, raha mahita ny tokony holazaina, azo antsoina avy hatrany ny laharana maitso 360. Efa nisy ihany sampandraharaha toy izao teo aloha fa fanatsarana ity, sady misy fomba vaovao, handrefesana ny zava-bitan’ny fadintseranana.
Misy teknisianina nahavita fiofanana manokana sy fianianana mandray ny antso rehetra, mikajy sy mampita izany any amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, miankina amin’izay sampandraharaha tokony hampitana ny hafatra. Manomboka eo, hisy ny fanamarinana sy ny fanaraha-maso izay vaovao voaray. Mety misy ny antso mahazo valiny eo no ho eo, raha fangataham-panazavana, ohatra.
“Manana tamberin’andraikitra amin’ny vahoaka ny ladoany ka porofoina amin’ny fanavaozana hisian’ny mangarahara izay tamberin’andraikitra izay. Ny angatahana amin’ny mpanjifa, hanome vaovao marina sy amin’ny antsipiriany. Marihina fa tsy misy arakaraka na fandraisana anaran’ny mpiantso sy ny laharan’ny findainy ho fiarovana azy”, hoy ny tale jeneralin’ny ladoany, i Lainkana Zafivanona Ernest. Satria tsy ny mpiasan’ny ladoany irery ny eny amin’ny seranan-tsambo na seranam-piaramanidina, nomarihin’ny tale jeneraly fa azo alefa amin’io laharana 360 io ny fitarainana momba ny mpitandro filaminana, ary anjaran’izy ireo ny mampita izany any amin’ny lehibeny.